Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Ku Adkaysanaya In Xamaas Hubka Dhigto
Maraykanka oo Ku Adkaysanaya In Xamaas Hubka Dhigto
Dawlada Maraykanka ayaa ka hadashay heshiiskii dhexmaray labada garab ee falastiiniyiinta ee Xamaas iyo Fataax, waxayna sheegtay in haddii ay tahay in Xamaas ay kusoo biirto dowladda daanta galbeed ka dhisan in marka hore ay shuruud tahay in Xamaas ay hubka dhigto.
Ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan arrimaha Falastiin Jason Greenblatt ayaa sheegay in dowlad kasta oo laga dhisayo Falastiin ay waajib tahay in ay aqoonsato jiritaanka dowladda Israa’iil, islamarkaasna ay hubka dhigaan kooxaha “argagixisada”.
Balse mas’uul u hadlay ururka Xamaas ayaa ku tilmaamay hadalka Maraykanka mid “farogalin cad ah”. Dowladda Israa’iil oo sida Maraykanka oo kale Xamaas u aqoonsan urur argagixiso ah ayaa sheegtay in aysan la macaamili doonin dowlad Falastiiniyiin ah oo ay Xamaas majaraha u hayso.
Heshiiska dhexmaray labada garab ee Falastiiniyiinta ayaa waxa uu dhigayaa in marinka Rafax ee Masar looga talaabo ay maamuli doonaan ciidamo ka socda Fatax, halka illaa 3,000 oo askari oo Fatax ka socda ay ku biiri doonaan booliiska magaalada Gaza. Waxa kale oo uu dhigayaa in lasoo dhiso dowlad wadaag ah.
Israa’iil ayaa diiday in ay heshiiska aqoonsato, waxayna dhigtay shuruudo ay ka midyihiin in Xamaas ay hubka dhigto, in lasoo wareejiyo meydadka iyo maxaabiista askartooda ee ay Xamaas haysato, in Fatax ay la wareegto maamulka Gasa, iyo in Xamaas xiriirka u jarto Iran. Afhayeen u hadlay Fatax ayaa sheegay in go’aanka Israa’iil uusan badali doonin in wadahadala horay loo wado, heshiiskana laga dhabeeyo.